के तपाईंलाई थाहा छ ? लामखुट्टेको टोकाईपछि किन शरीर चिलाउँछ ? – Samatal Online
के तपाईंलाई थाहा छ ? लामखुट्टेको टोकाईपछि किन शरीर चिलाउँछ ?
गर्मी र बर्खाको समयमा लामखुट्टको प्रकोप बढ्दछ । यस मौसममा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जस्ता रोग फैलने खतरा हुन्छ । यि रोग फैलाउन लामखुट्टेको टोकाई नै सबैभन्दा प्रमुख कारण हो ।
अझ लामखुट्टेले तपाईंको शरीरको रगत चुस्दा असहनीय दुखाई र टोकेको स्थानमा चिलाउने गर्दछ । तर के तपाईंलाई थाहा छ ? लामखुट्टेको टोकाइले किन हाम्रो शरीरमा चिलाउँछ ? यस्तो के कारण लामखुट्टको टोकाईपछि शरीर चिलाउँछ ?
शरीरमा रगत चुस्ने भाले लामखुट्टे नगन्य मात्रामा हुन्छन् । रगत चुस्ने लामखुट्टे पोथी मात्र हुन्छन् । पोथी लामखुट्टेहरु रगत चुस्दा कपाल जत्रो आकारको सुँडले शरीरमा घोच्ने गर्दछन् । शरीरबाट रगत निस्कदै गर्दा रगत जमेर ढिक्का बन्दछ । जसलाई सुँडले तान्न असहज भएपछि पोथी लामखुट्टे मानव शरीरमा एक विशेष प्रकारको विषालु रसायन उत्पादन गरी छालामा छोड्छन् । जो मानव शरीरमा पुग्नासाथ मानिसलाई चिलाउँन थाल्दछ ।
यसरी कुनै पोथी लामखुट्टेले शरीरबाट रगत चुस्दै गर्दा आफ्नो सुँडको माध्यमले आफ्नो थुकमा विषालु रसायल पैदा गरेर शरीरमा मिलाउँदा जमेको रगत पुन: पातलो भई सुँडले तान्न सहज हुन्छ ।
लामखुट्टको थुकमा जमेको पदार्थलाई पातलो बनाउने तत्वका साथै धेरै प्रकारका प्रोटिन समावेश हुन्छन् । जसलाई लामखुट्टेले आफ्नो सुँडबाट रगत चुस्दै गरेको मानिसको शरीरमा प्रवेश गराउनासाथ त्यसको साइड इफ्केटबाट बच्न हाम्रो शरीरको रोगप्रतिरोधक क्षमता सक्रिय हुन्छ । रोगप्रतिरोधक क्षमताले हिस्टामिन नामको एउटा कम्पाउन्ड सक्रिय गराएर हाम्रो सेता रक्तकोषलाई प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउछ र शरीरमा प्रवेश गरेको तत्वसँग लड्न मद्दत गर्छ ।
हिस्टामिन नामको सोही कम्पाउन्ड र लामखुट्टेले पैदा गरेको रसायनका कारण शरीर चिलाउँछ । लामखुट्टले टोकेको शरीरको भाग निकै संवेदनशील हुन्छ । जहाँ हामीले कन्याउन थालेपछि रसायन र हिस्टामिन फैलिएर झन्झन् चिलाउँन थाल्दछ । यसरी लगातार एकै स्थानमा कन्याउँदा चिलाएको स्थानको छालामा इंफेक्शन हुने खतरा हुन्छ ।